ITunes inoita kunge ine mazuva ayo akaverengerwa mu macOS | IPhone nhau
louis padilla | | iTunes, Noticias
Kana paine chishandiso cheApple icho chinounganidza zvakawiriranwa zvisina kunaka ongororo, zviri pachena kuti iTunes. Iko kunyorera, kunowanikwa paMacOS neWindows, kwaimbove kwakakosha kuti tikwanise kugadzirisa zvishandiso zvedu, kubata mimhanzi yedu kana kuita makopi ekuchengetedza. Ino nguva yaenda kare uye vazhinji vashandisi zvirokwazvo havatombo rangarira pavakapedzisira kuivhura.
Zvinotaridza kuti zvirongwa zveApple zvenguva yemberi hazvikurudziri pachishandiswa ichi, uye sevashandisi vazhinji vanga vachikumbira kwenguva yakareba, iyo kambani ichadzadzikisa iyo application mune akati wandei akazvimirira maapplication: Mumhanzi, TV, Podcasts uye Mabhuku.
Imwe yeaya mafomu yatovepo muMacOS, Mabhuku, kunyange zvisati zvave kusanganisira audiobooks, inozove chikamu chayo kana runyerekupe urwu rukazadzikiswa. Imwe yatove yakaziviswa, TV, iyo ichave iine Apple TV chikuva uye iyo Apple TV + sevhisi ichasvika kudonha uku. Isu taizongofanira kuona iyo yeMusic uye Podcasts kunyorera paMacOS, chinove chinozove zororo rakakura kune vazhinji vashandisi (kusanganisira ini) vanodzivisa kushandisa masevhisi aya paMacOS chaizvo nekuda kwekuremerwa kwazvinoita kushandisa iTunes zvichienzaniswa nezviri nyore sei kushandisa yakamira yega maapps pane iPhone kana iPad.
Ini zvino ndave nechivimbo kubva pauchapupu ini handidi kuzivisa parizvino kuti Apple iri kuronga nyowani (ingangoita UIKit) Music, Podcasts, pamwe Mabhuku, maapplication emacOS, kujoina iyo nyowani TV app. Ini ndinotarisira kuti mana ave anotevera mafungu eMarzipan maapplication. Zviyo zvemunyu, nezvimwe
Aive Steve Troughton-Smith uyo akatumira mukana uyu pa Twitter zvichibva pane humbowo hwaasina kuda kuzivisa. Uyu anovandudza akaongorora iyo iOS uye macOS kodhi pazviitiko zvakawanda, achitarisira mazhinji ezvinyorwa izvo Apple zvakazoburitsa pachena, saka kuvimbika kwayo kwakakwira. Pamusoro pezvo, runyerekupe urwu rwunoenderana zvakakwana nekuuya kwaMarzipan, chirongwa chaApple chekushandisa "universal" yeIOS neMacOS. TAgara TINE mienzaniso yezvishandiso zveIOS izvo zvakaendeswa kune macOS, senge Kumba, Masheya, Nhau kana Mazwi manzwi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » iTunes » ITunes inoita kunge ine mazuva ayo akaverengerwa paMacOS
Jimmy mufananidzo akadaro
Iyo iTunes inorema? Nhamo yekuti hauna kuwana nguva yekuzvinetsa nekushanda kunoita iTunes, kuwedzera mabhaisikopo, rwiyo, ruzivo, maalbum albums, kwandiri zvakakosha uye ndinoishandisa mazuva ese kuteerera mimhanzi YANGU uchishandisa mac.
Tsitsi ndedzekuti hauna kunetsekana nekutsvaga usati wataura nekuti ndine dzidziso dzekushandisa iTunes ndichitsanangura mashandiro azvo. Kuti iye anofunga kuti inorema hazvireve kuti iye anoziva maitiro ekuibata. Kuti iwe unoshandisa hazvireve kuti kune vanhu vazhinji vanozviona seyakagwadza app.
Ini ndinoishandisawo mazuva ese, kugadzira kana kugadzirisa zvinyorwa zvangu zvekutamba, kubata mafirimu akadhindwa uye akateedzana uye kukwanisa kuzvitarisa pane yangu apple tv neraibhurari yakagovaniswa, nezvimwe ... Kana iwe uchida kurerutsa uye kuita 3 mafomu kubva imwe, ini handioni kuti ndakaita kurerutsa kwakawanda pane izvo.
Ini ndinoshandisa zvakanyanya kuisa mapikicha kubva kuMac yangu kuenda kuApp Photos. Iwe une chaunoziva chero chinhu nezve isu kuti isu tingazviite sei kana ivo vachibvisa icho? Nekuti hauna kutaura chero mafoto
Pindura kuna AMB
Zvakanaka, ini ndiri mumwe munhu anoshandisa iTunes mazuva ese kuteerera mimhanzi uye chokwadi ndechekuti, chandinoshandisa icho (kutarisira raibhurari yangu yemumhanzi, kuisa mabhavhodhi ealbum, nezvimwe ...) zvinoita kunge zvisina kunetsa kwandiri.
Chimwe chinhu ndechekuti Apple inoita kunge yakatsunga kuti unyore kuApple Music nechisimba. Ndakatenga iyo HomePod uye kunyangwe ichirira zvakanaka, dai ndakaziviswa kare uye ndikaziva kuti yakagadzirirwa kuti kana ukaitenga iwe uchabhadhara yakatarwa kunyorera kuApple Music, ndingadai ndisina kuitenga uye ndingadai ndakasarudzira vamwe Sonos kana zvakafanana, zvakachipa uye stereo.
Kana kufamba kwaApple kurodha iTunes kune chinangwa chekutora chinotsiva icho chinokumanikidza kuti udye Apple Music ... isu tichafanirwa kutsvaga imwe sarudzo kunze kweApple yekuteerera mimhanzi paMac ... kana kuita somersault paPC , nekuti ini handisi kuda kubhadhara pamwedzi kana ndiine kirabhu hombe yangu… uye zvakare ndakave nemwedzi mitatu Apple Music kutongwa uye handina kuifarira zvachose !!
Ini ndaiti hei Siri pfeka jazz ini ndotamba Enya. Ndakamuudza kuti aise mablues uye aise chero chinhu ... uye neyakaipisisa interface, ipapo ini ndinorasika kuti ndiwane zvinondinakidza.
Amazon inoda Alexa mahedhifoni kukwikwidza neAirPods
Netflix inobvisa iyo AirPlay sarudzo paIOS, ichitevera tsoka dzeSpotify?